प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनका कारण परीक्षा सर्यो ! « Kathmandu Pati
प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनका कारण परीक्षा सर्यो !
प्रकाशित मिति : २०७६, २१ कार्तिक बिहीबार १०:५८
काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनका कारण परीक्षा सारिन्छ भन्ने सुन्दा अनौठो लाग्न सक्दछ । हो, नेपालका प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनका कारण परीक्षा नै सार्नुपरेको इतिहास छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणाको जन्म दिन परेपछि एसएलसी परीक्षा नै सार्नु परेको थियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा तालिका तयार गरी सार्वजनिक ग¥यो र सोहीअनुसार परीक्षा पनि धमाधम सञ्चालन गरिरह्यो । तर इतिहास विषयको परीक्षा तोकिएको दिन मोहनशमशेरको जन्म दिन परेछ । त्यो कुरा पनिकालाई हेक्का भएनछ ।
प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा हर्षाेल्लास भव्यताका साथ मनाउनुपर्ने प्रचलन छँदै थियो । त्यसैले त्यस दिन परीक्षा सञ्चालन गर्न नमिलेपछि परीक्षालाई भोलिपल्ट सार्नुपरेको थियो । गोरखापत्रका उपसम्पादक तथा शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)का अध्यक्ष प्रकृति अधिकारीले हालै ‘एसएलसीको इतिहास’ पुस्तक बजारमा ल्याएका छन् ।
उनको सो पुस्तकमा प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनका कारण परीक्षा सार्नुपरेको रोचक प्रसङ्गलाई उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको जन्मदिन पुस ७ गते थियो । यो घटना २००५ सालको हो । त्
यस दिन परीक्षा लिन नमिलेपछि भोलिपल्ट अर्थात् पुस ८ गते इतिहास विषयको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । नेपालमा एसएलसी परीक्षाको थालनी १९९० सालबाट भएको हो । त्यसबेलादेखि पटकपटक विभिन्न कारणले परीक्षा सरेको इतिहास छ ।
परीक्षा सरेकोसम्बन्धी एक अर्काे रोचक प्रसङ्गलाई पनि सोही पुस्तकमा समेटिएको छ । विराटनगरका परीक्षार्थीहरु परीक्षा केन्द्र वीरगन्जमा पुग्न नसक्दा परीक्षा सार्नुपरेको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो । २००३ साल पुस १७ गते जाँच स¥यो भनेर सूचना सार्वजनिक गरेर परीक्षा सरेको जनाउँ दिइएको थियो ।
त्यस वर्ष पुस २४ गतेदेखि माघ ४ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रसम्म नपुग्दा परीक्षा सरेको भनी पनिकाले ढाँट कुरा गरेको भनाइ सोही वर्ष परीक्षामा सम्मिलित भएका गोपीनाथ शर्माले दावी गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘मेरो इच्छाधीन कृषि विषय थियो । इच्छाधीन कृषि विषय लिने छात्रहरुले प्रयोगात्मक परीक्षा दिन ताहाचल एक्सपेरिमेन्टल फार्म पुग्नुपथ्र्याे । कृषि इच्छाधीन विषय लिने छात्रमा डीजीपीआई (शिक्षा निर्देशक) मृगेन्द्रशमशेरका छोरा आदित्यशमशेर पनि रहेछन् । उनीसँग त्यहाँ कुराकानी हुँदा उनी परीक्षा सुरु हुन दुई दिनअघिदेखि ज्वरो आइ बेरामी परेछन् । त्यसैले सात दिन परीक्षा सारिएको रहेछ भन्ने बुझियो ।’
२००८ साल फागुन ८ गतेबाट एसएलसी परीक्षा सुरु हुने भनी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसबाहेक अरुपटक पनि परीक्षा स्थगन भएका थिए । प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि पनि केही परीक्षा केन्द्रमा पनि परीक्षा स्थगन भएका छन् । २०७५ सालको एसईई परीक्षामा पनि प्रदेश २ मा यस्तै स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
कुल ३१० पृष्ठको एसएलसीको इतिहासमा एसएलसी परीक्षा सुरु भएदेखि गत भदौसम्मका सम्पूर्ण घटनालाई समेटिएको छ । एसएलसीको इतिहासका बारेमा विभिन्न लेखकले बेलाबखत थोरैथोरै लेखेका छन्, तर उनीहरुले पुस्तकका रुपमा लेखेका छैनन् । तसर्थ समग्र एसएलसी परीक्षाको इतिहास बोकेको यो पहिलो पुस्तक हो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
२००७ सालको आन्दोलनमा लागेकाले विद्यार्थीहरुले परीक्षाको तयारी गर्न नपाउँदा परीक्षामा सम्मिलित हुन सकेनन् । विद्यार्थीहरुले पुनः परीक्षाको माग राख्दै आएका थिए । अन्ततः मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि सरकारले १०४ जनालाई सङ्कटकालीन प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो ।
त्यस वर्ष तीनपटक पूरक परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । २००७ सालमा सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको भनी हल्ला निराधार रहेको दावी लेखक अधिकारीको छ । उनले पनिकामा रहेको मार्क लेजरअनुसार अनुत्तीर्ण भएकाहरु पनि थुप्रै रहेको दावी गरेका छन् ।
एसएलसी परीक्षा बोर्डका पहिलो परीक्षा नियन्त्रक नन्दराम उप्रेती वा हरमणि आदीमध्ये को हुन् भन्नेमा विवाद भइरहेको छ । लेखकले यस पनि प्रमाणका आधारमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
एउटै कोठामा कोरोना संक्रमित साथीसँग बसेकी नर्सको रिपोर्ट नेगेटिभ
काठमाडौं – सुनसरीबाट भक्तपुरको मध्यपुरथिमि शङ्खधर चोकमा नर्स साथीकोमा आएर
लकडाउनमा थप कडाइ, प्रदेश सांसदलाई फिर्ता पठाइयो
चितवन – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले लकडाउनलाई थप
तीन दिनअघि भारतबाट आएका थिए बाँकेका ८ जना कोरोना संक्रमित
राँझा – बाँकेको नरैनापुरमा आज भेटिएका कोरोना सङ्क्रमित आठै जना
महोत्तरी – लुकीछिपी सीमा नाघेर आवतजावत नरोकिएपछि महोत्तरी जिल्लाको भारतीय